Kubika kunogona kuita basa rinogutsa kana kuti rinogumbura; zvisinei, vanhu vanofarira kubika vanozozvinakidzwa. Kuva nechakanaka kufambidzana kicheni ndiyo ingave nzira yakanakisa yekuenda asi inogona zvinodhura. Usarega izvo zvichikutadzisa kunakidzwa neshungu dzako. Pazasi pane matipi uye maturusi ekicheni ekugadzira kufambidzana.
Iva Akarongeka. Declutter chero zvisina basa zvinhu ku ipa nyowani nzvimbo yezvinhu zvaunoda. Ita shuwa kuti yakagadzirirwa nenzira inogona kuwanikwa nyore. Chengetera zvinhu mumabhokisi ekuchengetera uye wozvinyora kuti zvive sangano.
Seta zvinhu (ex: zvishandiso, mwaka, mapani) izvo zvaunoda zvakanyanya kutenderedza nzvimbo yekubikira. Iwe haufanire kunetseka nezve kuvaburitsa kubva mumakabati.
Ita shuwa kuti pane yakakwana nzvimbo ye wiricheya kuwana. Iyo pfungwa nzvimbo iri 5x5 tsoka kutendeuka nharaunda.
Kuva nechitofu chepamusoro chinokutendera kutsvedza kubva muhari kana pani kubva padhifu kuri nyore kusimudza nekubvisa zvinhu zvinopisa.
For vanoshandisa wiricheya, midziyo midiki (ex: toaster oven, microwave) inofanirwa kuiswa munzvimbo inosvikika senge yakaderera counter kumusoro kana masherufu akaderera akavhurika.
kufambidzana Kicheni Zvishandiso:
Unogona Kuvhura - isa madziro akaiswa anogona kuvhura pakakwirira zvinokodzera iwe. Iwe haufanire kunetseka nezvekuzungunuka neinogona kuvhura kuti iyo inogona kuvhurika futi.
Yekushandisa Ngoro / Inotakurika Kufamba Ngoro / Kusundira Ngoro - Inokutendera iwe kutamisa kitchenware kuyambuka mukamuri kana iwe uchida kufambisa a rinorema hari kana mahwendefa akati wandei nembiya.
Chef Mat - Matai akapfava uye rubbery kune vanhu vanonzwa kusagadzikana kana vakamira kwenguva refu. Inogona kufamba-famba kwese kwaunenge uchishanda.
Chikafu processor - Yakanakisa nzira yekukamura uye kucheka chikafu ku kudzivirira chero kukuvara zvisina basa. Zvakachengeteka pane kubata mapanga.
Sink Faucet - Pombi iri maoko akasununguka kana kubatika zvemagetsi zvinokodzera munhu wese. Iyo inokutendera iwe kukurumidza kusuka maoko ako usinganetseke nezve kubatidza / kudzima pombi.